Jeremiya 38 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
38 Zvino Shefatiya mwanakomana waMetani naGedhariya mwanakomana waPashuri naJukari+ mwanakomana waSheremiya naPashuri mwanakomana waMarikija+ vakanzwa mashoko akanga achitaurirwa vanhu vose naJeremiya,+ achiti: 2 “Zvanzi naJehovha, ‘Munhu acharamba achigara muguta rino ndiye achaurayiwa nebakatwa,+ nenzara+ uye nedenda.+ Asi munhu achaenda kuvaKadheya ndiye acharamba achirarama uye mweya wake uchava kwaari sechinhu chakapambwa uye uri mupenyu.’+ 3 Zvanzi naJehovha, ‘Chokwadi guta rino richaiswa mumaoko euto rehondo ramambo weBhabhironi, uye acharitora.’”+ 4 Zvino machinda akati kuna mambo: “Tapota, murume uyu ngaaurayiwe,+ nokuti ari kunetesa maoko evarume vehondo vasara muguta rino nemaoko evanhu vose saizvozvo, nokutaura navo maererano nemashoko aya.+ Nokuti murume uyu haasi kutsvakira vanhu ava rugare asi dambudziko.” 5 Naizvozvo Mambo Zedhekiya akati: “Tarirai! Iye ari mumaoko enyu. Nokuti mambo haangakudzivisii kuita chero chinhu chipi zvacho.”+ 6 Zvino vakatora Jeremiya, vakamukanda mumugodhi wemvura waMarikija+ mwanakomana wamambo, waiva muChivanze cheVarindi.+ Naizvozvo vakadzikisa Jeremiya netambo. Zvino mumugodhi macho makanga musina mvura, asi maiva nematope; uye Jeremiya akatanga kunyura mumatope acho.+ 7 Zvino Ebhedhi-mereki muItiopiya,+ murume akanga ari mukuru mukuru uye aiva muimba yamambo, akanzwa kuti vakanga vaisa Jeremiya mumugodhi; uye mambo akanga akagara paGedhi raBhenjamini.+ 8 Naizvozvo Ebhedhi-mereki akabuda muimba yamambo akataura namambo, achiti: 9 “Haiwa ishe wangu mambo, varume ava vaita zvakaipa pane zvose zvavaitira muprofita Jeremiya, wavakanda mumugodhi, kuti afire+ imomo nenzara.+ Nokuti muguta hamusisina chingwa.” 10 Mambo akabva arayira Ebhedhi-mereki muItiopiya, achiti: “Tora varume makumi matatu vauri kutarisira munzvimbo ino, ubudise muprofita Jeremiya mumugodhi asati afa.”+ 11 Naizvozvo Ebhedhi-mereki akatora varume vaaitarisira, akapinda muimba yamambo pasi penzvimbo yaichengeterwa pfuma,+ akatora mamvemve nemachira akasakara ipapo, akazvidzikisira Jeremiya mumugodhi+ netambo. 12 Ebhedhi-mereki muItiopiya akabva ati kuna Jeremiya: “Ndapota, isa mamvemve nemachira akasakara muhapwa mako pasi petambo.” Jeremiya akaita saizvozvo.+ 13 Vakazokwidza Jeremiya netambo, vakamubudisa mumugodhi macho. Jeremiya akaramba achigara muChivanze cheVarindi.+ 14 Zvino Mambo Zedhekiya akatumira shoko, akaunza muprofita Jeremiya kwaaiva+ panopindwa napo pechitatu,+ paiva muimba yaJehovha,+ mambo akabva ati kuna Jeremiya: “Ndiri kukukumbira chimwe chinhu. Usandivanzira chero chinhu chipi zvacho.”+ 15 Jeremiya akati kuna Zedhekiya: “Kana ndikakutaurirai, chokwadi hamuzondiurayi here? Kana ndikakupai mazano, hamuzonditeereri.”+ 16 Mambo Zedhekiya akabva apika kuna Jeremiya vari munzvimbo yakavandika, achiti: “NaJehovha mupenyu, akatipa mweya uyu,+ handizokuurayi, uye handizokuisi muruoko rwevarume ava vari kutsvaka mweya wako.”+ 17 Zvino Jeremiya akati kuna Zedhekiya: “Zvanzi naJehovha, Mwari wemauto,+ Mwari waIsraeri,+ ‘Chokwadi kana mukaenda kumachinda amambo weBhabhironi,+ mweya wenyu ucharamba uchirarama uye guta rino harizopiswi nomoto, uye imi neimba yenyu mucharamba muchirarama.+ 18 Asi kana musingazoendi kumachinda amambo weBhabhironi, guta rino richaiswawo mumaoko evaKadheya, vacharipisa nomoto,+ uye imi hamuzopukunyuki mumaoko avo.’”+ 19 Mambo Zedhekiya akabva ati kuna Jeremiya: “Ndiri kutya vaJudha vaya vakaenda kuvaKadheya,+ kuti vangandiisa mumaoko avo, vakandiitira zvakaipa.”+ 20 Asi Jeremiya akati: “Havazokuisai saizvozvo. Ndapota, teererai inzwi raJehovha pane zvandiri kukuudzai, zvichakufambirai zvakanaka,+ uye mweya wenyu ucharamba uchirarama. 21 Asi kana mukaramba kuenda,+ ichi ndicho chinhu chandaoneswa naJehovha: 22 Tarirai! vakadzi vose vakasiyiwa muimba yamambo waJudha+ vachaendeswa kumachinda amambo weBhabhironi,+ uye vachati, ‘Varume vamuine rugare navo vakakufurirai+ uye vakakukundai.+Vakaita kuti tsoka dzenyu dzinyure mumatope chaimo; vakatiza vakananga kumwe.’+ 23 Vachaendesa madzimai enyu ose nevanakomana venyu kuvaKadheya, uye imi hamuzopukunyuki mumaoko avo,+ asi muchabatwa noruoko rwamambo weBhabhironi, uye muchaita kuti guta rino ripiswe nomoto.”+ 24 Zedhekiya akati kuna Jeremiya: “Ngaparege kumbova nomurume anosvika pakuziva nezvezvinhu izvi, kuti iwe urege kufa. 25 Kana machinda+ akanzwa kuti ndataura newe, akauya maunenge uri, akati kwauri, ‘Tapota tiudze, Wataura namambo nezvei? Usativanzira chero chinhu chipi zvacho, hatizokuurayi. Mambo ataura newe nezvechii?’ 26 utiwo kwaari, ‘Ndanga ndichikumbira kunzwirwa nyasha pamberi pamambo, kuti arege kundidzorera kuimba yaJehonatani+ kuti ndifire ikoko.’” 27 Kwapera nguva yakati, machinda ose akapinda maiva naJeremiya akatanga kumubvunza. Iyewo, akaaudza maererano nemashoko aya ose akanga arayirwa namambo.+ Naizvozvo iwo akanyarara pamberi pake, nokuti nyaya yacho haina kunzwika. 28 Jeremiya akaramba achigara muChivanze cheVarindi+ kusvikira zuva rakatorwa Jerusarema.+ Zvakaitika pakatorwa Jerusarema chaipo.+